Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Technology » Nabadgelyada Warshadaha ee Websaytka Websaydhadu waxay ka buuxaan godad
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Jebinta xogtu waxay ku abuuri kartaa saamayn domino dhammaan ururo badan iyada oo dib loo adeegsado aqoonsiyada dhammaan koontooyinka shaqsiyeed iyo kuwa ganacsi.
Shirkadaha warshadaha martigelinta waxay leeyihiin kaliya 29% furayaasha sirta ah.
Dib -u -isticmaalka furaha sirta waa dhibaato aad u weyn oo khatar weyn ku ah.
Haddii hal erayga sirta ah waxyeello loo geysto, dhammaan akoonnada kale ayaa iyagana khatar la gelinayaa.
Shaqaalaha warshadaha martigelinta waxay la halgamayaan furayaasha sirta ah, warbixinta warshadaha cusub ayaa shaaca ka qaaday 17 ka mid ah warshadaha la baaray, shaqaalaha warshadaha soo dhoweynta ayaa inta badan isticmaala magaca shirkadooda sir ahaan. Halkii ay la imaan lahaayeen eray sir ah oo casri ah si loo ilaaliyo xisaabaadkooda ganacsi, dadku waxay si fudud magaca shirkada ugu dhigaan furahooda.
Intaa waxaa dheer, shirkadaha warshadaha soo -dhoweynta waxay leeyihiin kaliya 29% furayaasha sirta ah. Tani waxay ka dhigan tahay in in ka badan saddex-meelood laba ka mid ah shaqaalaha ay dib u isticmaalaan furahooda sirta ah akoonnada.
Dib -u -adeegsiga ereyga sirta ah waa dhibaato aad u weyn oo khatar weyn ku ah macaamiisha iyo meheradaha labadaba. Haddii hal erayga sirta ah waxyeello loo geysto, dhammaan akoonnada kale ayaa iyagana halis la gelinayaa, khubarada amniga ayaa ka digaya.
Cilmi -baaristu waxay sidoo kale daaha ka qaadday 10 -ka ugu sarreeya erayga sirta ah ee ugu badan ee ay adeegsadaan shaqaalaha warshadaha soo -dhoweynta. Nasiib darrose, midka ugu caansan waa “furaha”.
Waa kuwan 10 -ka sirood ee ugu sarreeya warshadaha soo -dhoweynta:
Magaca shirkada *
Magaca shirkadda ***
Magaca shirkadda 1*
Cilmi-baadhayaashu waxay falanqeeyeen xogta ka timid jebinta dhinac saddexaad ee dadweynaha ee saameeyay shirkadaha Fortune 500. Guud ahaan, xogta la falanqeeyay waxaa ku jiray 15,603,438 jebinta waxaana loo kala saaray 17 warshado oo kala duwan. Cilmi -baadhayaashu waxay eegeen 10 -ka sirood ee ugu sarreeya ee loo adeegsado warshad kasta, boqolleyda furaha sirta ah ee gaarka ah, iyo tirada jebinta xogta ee saamayneysa warshad kasta.